Le flethi ebanzi eyi-3 bhk multistorey iyatholakala ukuze iqashwe futhi itholakala eNeminath Group Ocean View, okungenye yamaphrojekthi ahlonishwa kakhulu e-Andheri West. Yimpahla enempahla encane. Le ndawo yokuhlala isilungele ukungena. Isikhathi ozosichitha lapha sizoba yisikhathi esikhulu kakhulu sempilo yakho esizokusiza futhi ukuba ukhululeke, uphumule uvuse umuzwa omkhulu wenjabulo. Umphakathi uxhunywe kahle izindlela ezahlukahlukene zokuhamba. Uma unentshisekelo, sicela uxhumane nathi ukuthola eminye imininingwane.